Fikajiana ny tanjonao momba ny fahalalahana ara-bola
Tsindrio ny sary raha télécharger ny vakizoroNy nofinofy tsara indrindra raha manomboka orinasa an-tserasera dia ny famoronana tena Fahafahana ara-bola marina. Azoko antoka fa hanaiky ahy ianao fa alohan'ny ahafahanao malalaka ara-bola dia mila azonao tsara ny vola ilainao ho mpandraharaha amin'ny fotoana feno.
Mba hanampiana anao handamina ny fandanianao manokana dia namelatra takelaka natokana ho anao antsoina hoe "kajy ny tanjonao momba ny fahalalahana ara-bola".
Ny hevitra dia ny hidiranao amin'ny makelety amin'ny fandanianao isan-kerinandro, ny fandanianao isam-bolana ary ny fandanianao isan-taona. Ny spreadsheet dia hanombatanao avy hatrany ny vola ilain'ny orinasan-tserasera an-tserasera isan-taona, isam-bolana ary isan-kerinandro.
Azonao atao ihany koa ny mamorona takelaka manokana amin'ny fampiasana ity fomba mitovy ity hanombanana ny fandaniam-bola an-tserasera.
Vantany vao manana ireo tarehimarika ireo ianao dia afaka mamorona kendrena mazava ho an'ny orinasanao amin'ny Internet avy eo ary hahafantatra tsara ianao rehefa afaka manohana anao ny orinasanao an-tserasera ary afaka mandeha manontolo andro ianao.
Azonao atao ny misintona ny tapakila momba an'io rohy io;
Adikao ny Spreadsheet
Fananganana fananana ara-bola - Aza mangataka alahelo!
Rehefa mitady vola hividianana fananana Joint-Venture (JV) dia tsy afaka mangataka olona fotsiny ianao - mila mieritreritra ny WIIFT ianao! (Inona no ao amin'izy ireo). Ny olona manam-bola dia mety niasa mafy mba hahazoana izany ary hiaro tena amin'ity fananana iraisampirenena ity - Te hanao ny volany anefa izy ireo. Raha tsy mamokatra fiverenana ny renivohitra dia mihena izany ary mety tsy maintsy hiaina ny tahiry izy ireo (toe-javatra very fatiantoka).
Mila manana demonia ianao amin'ny fotoana ahazoana "Win-Win" afaka atolotra azy ireo, raha fohifohy dia tokony ho fantatry ny mpamatsy vola JV (amin'ny pejy iray);
a) Inona no atao hoe fananana fananana ary nahoana izany no mahasoa (lafiny hafa na fihenam-bidy manokana anananao)?
Ahoana no hanoratana drafitr'asam-barotra mahomby?b) Firy no ilaina ary firy ny tombony azoko?
c) Hafiriana no hamehezana ny vola?
d) Ahoana no ahazoako miverina raha misy zavatra tsy mandeha (inona no fiarovana azonao)?
e) Iza ianao ary maninona no mino aho fa afaka mamita ny varotra manontolo (Ny fahaizanao sy ny traikefa na ny fahaizanao sy ny traikefa ananan'ny ekipanao / ny zavatra hafa sns).
Na dia tany am-boalohany A4 aza no nampifanarahinao tamin'ny voalohany ny fampahalalana rehetra (fanazaran-tena tsara) dia tokony hanana antontan-taratasy lava kokoa ianao hitarina amin'ny teboka isan-karazany raha toa ka misy tombony voalohany, itazako izany hatrany amin'ny 6 pejy farany - ho an'ny fifanarahana fehezanteny lava kokoa na lava dia mila manana drafitra bus feno ianao. Kitiho ny sary mankany maimaim-poana maimaimpoana maimaimpoana momba ny fomba hanoratana drafitra drafitra mahomby.